Check Your Device Font, Unicode is Already OK or Not OK. | Online Service Center Myanmar -->
Check Your Device Font, Unicode is Already OK or Not OK.
Unicode Ya Lar(Unicode is Already OK or Not OK)
Time to change Unicode (1st Oct, 2019)
သင့်ရဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ Device ထဲမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်အဆင်ပြေမပြေစစ်ဆေးပြီး ယူနီကုတ်ဖောင့်ကစက်ထဲမှာအသင့်ရှိနေတယ်။ ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ပဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုပါက အောက်ပါ Link များမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုပြီး ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
1. How to change how to use mobile phone ( ios or android ) for Unicode.(ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်။)
2. How to add Unicode font for Android and iPhone(ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်။)
3. Unicode ဘယ်လိုသွင်းရမှာလဲ? - How to add Unicode for iPhone, Android, PC( Laptop or Desktop ) Video tutorial(ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာတွေမှာယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်ဗီဒီယို။)
4. How to add Unicode font and ttKeyboard for iPhone, iPad( iOS Device များအတွက် ဖောင့်နဲ့ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းနည်း။)
5. How to add Gboard and TT keyboard for Android( အသုံးများ Android ဖုန်းများအတွက် ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်။).
6. Android SMS and Utility ရယူရန်။( Android ဖုန်းများတွင် Message များ Contacts များတွင် ဖောင့်မှန်စေမည့် App.)
7. How to use Myanmar Unicode font for Windows10 and Mozilla Firefox( ဝင်းဒိုးကွန်ပြူတာနှင့် Browser များအတွက် ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းနည်း။).
Unknown October 2, 2019 at 11:15 PM
Why does not showing "offline speech recognition" under the voice typing list after installed Gboard? So, I can not use voice typing.